६ कक्षाकी विद्यार्थीले हो’स्टलमै बच्चा ज’न्मा’ईन्, हे’ड’सर गि’र फ्ता’र ! – List Khabar
Home / अन्तरास्ट्रिय / ६ कक्षाकी विद्यार्थीले हो’स्टलमै बच्चा ज’न्मा’ईन्, हे’ड’सर गि’र फ्ता’र !
admin3weeks ago अन्तरास्ट्रिय Leaveacomment 65 Views
दु’वैजनालाई घ’ट’ नाका बारेमा जानकारी न’दिएर प्र’शासनबाट लु’का’उन खोजेको आ’रो’ प लगाइएको छ । सरकारी तवरबाट सञ्चालित उमुरी आश्रम नामको उक्त विद्यालय आदिवासी जनजातिका ब’च्चाहरुले पढ्ने आवसीय स्कु’ल हो । छा’त्राले होस्टेलमा नै बच्चा जन्माएकी थिइन् ।
स्कु’लमा उक्त घ’ट’ ना भएपछि ति छा’त्रालाई समेत एक जि’पमा राखेर उनको गाउँ उप्परकेंडीमा बाबु आमाको साथमा प’ठाइएको थियो । प्रारम्भिक अ.नुसन्धानपछि प्र’ह’रीले प्रधानाध्यापक कै’लाश बर्मा र होस्टल सुपरीटेन्डेन्ट सबिता गु’रुलाई नि’यन्त्रणमा लिएको हो ।
ज’नवरीदेखि यता स्कुलमै छा’त्राले बच्चा जन्माएको यो दोस्रो घ’ट ना हो । यसअघि २३ ज’नवरीमा कन्धमाल जि’ल्लाको लिं’गागडामा एक आ’वासीय स्कुलमा १० कक्षामा पढ्ने छा’त्रा’ले होस्टलमै बच्चा ज’न्माएकी थिइन् ।
Previous लामोसमय पछि सर्वसाधारणलाइ खुसि बनाउंदै, आज देखि काठमाडौं उपत्यकामा यस्तो नियम लागु
Next मिर्गौला दान गर्न नेपालमा सर्वोच्च अदालतले ल्याइदियो नयाँ नियम, अब यस्ता ब्याक्तिले पनि दिन पाउने !